ရာနဲ့ချီတဲ့ လေးကေ့ကော်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဟန်ထူးလွင် – Shwe Likes
အဆိုတော် ဟန်ထူး လွင် ကတော့ လက် ရှိနွေဦးေ တာ်လှ န်ရေးမှာ အတ က်ကြွဆုံး ပါဝင် လှုပ် ရှားနေတဲ့ အနုပ ညာရှင်တစ်ေ ယာက်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။
သူတက်ကြွ မ်းတဲ့ အနုပညာအ လုပ်နဲ့ ရန်ပုံငွေေ တွများစွာရှာေ ဖွေ ပးနေတဲ့ ဟန် ထူးလွင်က NUG အစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဦးရည်မွ န်ဆီကနေ ကျေးဇူးတ င်ဂုဏ်ပြု လွှာကိုလည်း ချီးမြှင့်ခံထားရသူတ စ်ယောက်ြ ဖစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မှာလည်း ဟန်ထူး လွင်က ကရင်ြ ပည်နယ် လေးကေ့ကော်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြ ည်သူတွေအတွ က် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအေ ဆာင်တွေကို လှူဒါန်းပေး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဟန်ထူးလွင်က “လေးကေ့ေ ကာ် စစ်ဘေးရှော င်များအတွက် ဒီနေ့ ပို့ပေးဖြစ်။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ် ဘုတ်စာမျ က်နှာကနေ ပြောလာ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ဟန်ထူးလွင် ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် လေးေ က့ကော်မြို့က ရာနဲ့ချီတဲ့ စစ်ေ ဘးရှောင်ပြည်သူေ တွအတွက် သွား တိုက်တံ၊ သွားတို က်ဆေး၊ ကလေး သုံးဒိုက်ဘာနဲ့ အစားအေ သာက်တွေ များစွာကို ဝယ်ယူပြီး လှူဒါန်းပေး ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source: Han Htue Lwin’s fb
အဆိုေတာ္ ဟန္ထူး လြင္ ကေတာ့ လက္ ရွိေႏြဦးေ တာ္လွ န္ေရးမွာ အတ က္ႂကြဆုံး ပါဝင္ လႈပ္ ရွားေနတဲ့ အႏုပ ညာရွင္တစ္ေ ယာက္ပဲျဖစ္ပါတ ယ္။
သူတက္ႂကြ မ္းတဲ့ အႏုပညာအ လုပ္နဲ႔ ရန္ပုံေငြေ တြမ်ားစြာရွာေ ေဖြ ပးေနတဲ့ ဟန္ ထူးလြင္က NUG အစိုးရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးရည္မြ န္ဆီကေန ေက်းဇူးတ င္ဂုဏ္ျပဳ လႊာကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံထားရသူတ စ္ေယာက္ျ ဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ မွာလည္း ဟန္ထူး လြင္က ကရင္ျ ပည္နယ္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕က စစ္ေဘးေရွာင္ၿပ ည္သူေတြအတြ က္ လိုအပ္တဲ့ အသုံးေအ ဆာင္ေတြကို လႉဒါန္းေပး ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဟန္ထူးလြင္က “ေလးေက့ေ ကာ္ စစ္ေဘးေရွာ င္မ်ားအတြက္ ဒီေန႔ ပို႔ေပးျဖစ္။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ့ေဖ့စ္ ဘုတ္စာမ် က္ႏွာကေန ေျပာလာ တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ဟန္ထူးလြင္ ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ေလးေ က့ေကာ္ၿမိဳ႕က ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ စစ္ေ ဘးေရွာင္ျပည္သူေ တြအတြက္ သြား တိုက္တံ၊ သြားတို က္ေဆး၊ ကေလး သုံးဒိုက္ဘာနဲ႔ အစားေအ သာက္ေတြ မ်ားစြာကို ဝယ္ယူၿပီး လႉဒါန္းေပး ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Source: Han Htue Lwin’s fb